မျက်နှာပေါ်က ဆဲလ်သေတွေကို တကယ်ပဲဖယ်ရှားသင့်သလား? – YANGON STYLE
မျက်နှာပေါ်က ဆဲလ်သေတွေကို တကယ်ပဲဖယ်ရှားသင့်သလား?
မျက်နှာညိုညစ်မဲညစ်တာ၊ အဆီနဲ့ ဝက်ခြံဖြစ်စေတဲ့ တရားခံဟာ ဆဲလ်သေတွေကြောင့်လို့ယူဆပြီး ကွာကျစေဖို့အတွက် Scrub, Peeling ကို ပြုလုပ်တတ်ကြပါတယ်။ ဆဲလ်သေတွေက အမှန်တကယ်ပဲ အရေပြားညိုညစ်စေတဲ့ အဓိက တရားခံဆိုတာရော သေချာလို့လား ကြည့်လိုက်ရအောင်။
အရေပြားရဲ့ ဆဲလ်သက်တမ်းဟာ (၂၈) ရက် ၁ လဝန်းကျင်လောက်ရှည်ကြာပါတယ်။ အရေပြားအလွှာအောက်မှာ ဆဲလ်အသစ်တွေဟာ မွေးဖွားနေပြီး ဆဲလ်အဟောင်းတွေဟာ အောက်ခြေလွှာကနေ အရေပြားအပေါ်လွှာကို တဖြည်းဖြည်းတက်လာပြီး သက်တမ်းကုန်တဲ့အခါ သေသွားကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် တစ်ခုနဲ့ တစ်ခု ဆက်ထားနေတုန်းပါပဲ။ အချိန်တန်မှသာ အလိုလို ကွာသွားတာဖြစ်ပါတယ်။
ဆဲလ်သေအလွှာလေးက အရေပြားကို ပိတ်ထားတဲ့အတွက် တော်ရုံပိုးမွှားမဝင်ရောက်နိုင်အောင် ကာကွယ်ပေးထားတဲ့အတွက် အင်မတန် တန်ဖိုးရှိပါတယ်။ အသက်အရွယ် ကြီးရင့်လာတဲ့အခါ အရေပြားရဲ့ ဆဲလ်ပွားနှုန်းက နှေးသွားပါတယ်။ဆဲလ်ပွားနှုန်းသွားတဲ့အတွက် အရေးအကြောင်းနဲ့ အတွန့်တွေ ပေါ်လာတတ်ပါတယ်။
ဒါကြောင့်မို့ ဆဲလ်သေတွေကို ခွာချခြင်းအားဖြင့် ဆဲလ်ပွားနှုန်းမြန်အောင် လုပ်လာကြပါတယ်။ ဆဲလ်သေတွေကို ကွာကျစေဖို့အတွက် Scrub လုပ်ခြင်းနှင့် Peelingလုပ်ခြင်း အစရှိသည်တို့ကို ပြုလုပ်လာပါတယ်။
သို့သော် ဆဲလ်သေတွေ ကွာကျစေတဲ့ Scrub မျိုးကို တစ်ပတ်လျှင် (၂)ကြိမ်ထက်ပိုမလုပ်သင့်ပါဘူး။ ပိုမိုသန့်စင် ဖြူဝင်းလာတယ်လို့ထင်ရပေမယ့် ကာကွယ်ပေးမယ့် အပေါ်ယံဆဲလ်သေအလွှာရှိမနေတော့တာကြောင့်
Sensitive Skin အဖြစ်အထိကို ဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်။
Peeling ခဏ ခဏ လုပ်ခြင်းကလည်း အရေပြား အောက်ခြေအထိကို တိုက်စားသွားစေပြီး အရေပြားထိခိုက်တဲ့အတွက် ပုံမှန် အရေပြားရဲ့ ဖြစ်စဉ် ပျက်ဆီးသွားလို့ ခုခံကာကွယ် နိုင်တဲ့စွမ်းရည် ကျသွားပါလိမ့်မယ်။ အခြားသော ရေဓာတ်ခမ်းခြောက်ခြင်း၊ တင်းတိတ်ဖြစ်လွယ်ခြင်း၊ အိုမင်းရင့်ရော်ခြင်းနှင့် မလိုလားအပ်တဲ့ဆိုးကျိုးများကိုဖြစ်စေပါတယ်။
ဒါကြောင့် သဘာဝတရာကြီးက ဖန်တီးပေးပြီးသား ဖြစ်စဉ်တွေကို မထိခိုက်ပဲ တန်ဆေး၊ လွန်ဘေးဆိုသလို ဆင်ခြင်ရင်း ထိန်းသိမ်းလှပနိုင်စေရန်အတွက် မျက်နှာပေါ်က ဆဲလ်သေတွေကို တကယ်ပဲဖယ်ရှားသင့်သလား ဆိုတာကို ပြောပြပေးလိုက်ပါတယ်။